गाउन नमिल्ने गीत, सुनाउन नमिल्ने कथा | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, जेष्ठ १८, २०७७ मा प्रकाशित
वात मार्न नपार सारै खसखस भा’को थ्यो ठ्याक्कै भिरघरे आइपुग्यो ।
‘लु यही गुन्द्रीमा बस हौ भतिज ! के कामले आइस् कुन्नि !’
के काम हुन्छ हौ काका ! बेकामेको । हाम्रो काम नहुनु नै काम हो । यसो सर्मेको पत्रिका पसल गएँ । अस्ति विहिबारको दुइटा पत्रिका आ’को र छ त्यो पढें । अनि चिया पसलमा गफाष्टकहर्को गफ सुने । राम…राम…राम ! त्यहाँ पो हुन्छ राजनीति ! त्यहाँ भेला हुने मान्छेले नजानेको केही छैन । सुन्न मात्रै सक्नु पर्छ विश्व व्रह्माण्ड नै खोतलखातल पार्छन गाँठे ।
भन्न चैं के भन्छन् नि भिरघरे !
के भन्नु ! त्यही पत्रपत्रिका, अनलाइन, फेसबुकतिर आ’को हावा कुरा पढ्यो विचार बनायो अरुलाई सुनायो गर्छ नि ! हुन त हाम्रो पत्रकार, विद्वान, बुद्धिजीवी सबै उस्तै छ । काठमाडौंमा मेरो साथी छ क्या काका पर्यटन बोर्डमा पहिला बोर्ड सदस्य भएर काम गथ्र्यो । कृष्णकुमार अर्याल हो उहाँको नाम । उहाँले नेवारीमा ‘हाले मज्युगु म्ये, कने मज्युगु बाखः भन्नु हुन्थ्यो त्यस्तै हो ।
हैन ! त्यो भनेको चै के हो नि !
त्यो चै काका ! आफूले गल्ती गरेपछि अरुलाई सुनाउदै हिड्न मिलेन । घरमा कसैले नराम्रो काम ग¥यो भने छिमेकीलाई सुनाउने कुरो भएन । सरकारले गल्ती ग¥यो भने सरकारी सांसदले भन्दैन । पार्टीले गल्ती गरे त्यही पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पनि ढाकछोप नै गर्छन् । अपिसको हाकिमले गल्ती ग¥यो भने पनि अरु कर्मचारीले भन्दैनन् । त्यसलाई चैं नेवारीमा ‘हाले मज्युगु म्ये, कने मज्युगु बाखः’ भन्दो रै’छ । कृष्णकुमार अर्यालले बेला बेला यसै भन्नुहुन्थ्यो ।
नेपालीमा ठ्याक्कै मिल्ने चैं के रछ त ! भतिज ।
त्यसको अर्थ मैले काठमाडौ गोकर्णेश्वर वार्ड नं. ८ का समाजसेवी कुमार श्रेष्ठलाई सोधेको थिएँ उहाँले ‘गाउन नमिल्ने गीत, सुनाउन नमिल्ने कथा’ हो भन्नुभयो । अहिले हाम्रो नेपालमा यही भैरा’को छ ।
अलि मैले बुझ्ने गरी भन् न भिरघरे ।
यो एक हप्ता भित्र हाम्रा पत्रकार, बुद्धिजीवी लेखक, नेता धेरैले झुठो कुराको प्रचार गरे । जस्तो कि – नेपाली काँग्रेसले समय मागेपछि संविधान संशोधनको विषय दुई तीन दिनलाई पछि सारेको थियो । ‘काँग्रेस संविधान संशोधन नगर्ने पक्षमा’ भनेर हाम्रो झार्लाङ्गे खुइते बरिष्ठ पत्रकारहर्ले लेख्न भ्याई हाल्यो । अनि आफूलाई बुद्धिजीवी भनाउदोहर्ले पनि प्रचार गर्न भ्याई हाल्यो । अब सबैलाई थाहा छ संविधान संशोधन गर्ने कार्यबाट काँग्रेस पछि हट्तैन भन्ने । अनि यस्तो कुराको किन नकारात्मक प्रचार गरेको ?
अर्को कुरा नि काका ! श्यामशरण आएर काठमाडौको मेरियट होटलमा बसेर नेपाली नेतालाई भेटेर संविधान संशोधन नगर्न दबाव दिदै छन् भनेर खुबै प्रचार गरे । मैले पनि मेरियट होटलमा काम गर्ने हाम्रो धोर्जीलाई फुन गरेर सोधें । भरे केको हुन्थ्यो ! सबै हावा पो रछ !
फेरि हाम्रो बरिष्ठ पत्रकार लगायत झालाङ्गे बौद्धिकहर्ले ‘स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कोरोना’ भनेर प्रचार गरी हाल्यो । यता स्वास्थ्य मन्त्री भने कार्यक्रममै ब्यस्त हुनुहुन्छ । ए बाबा हो ! जेसुकै लेखेका छन्, प्रचार गरेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने यस्तो झुठो अफवाह फैलाउनेहर्लाई खोजी खोजी कोर्रा लगाउनु पर्ने हो ।
हामीलाई त थाङ्नामै सुताउँछन् काका ! हुँदाहुदै ‘राजाको फोटो भा’को नोट अबदेखि नचल्ने’ भनेर प्रचार गर्दिए । यो पनि बुझ्दै जाँदा हावा नै रछ ! यिनार्ले जे पनि प्रचार गर्न पाउने ? जे पनि लेख्न, भन्न पाउने ? मलाई लाग्छ यसरी छाडा छोड्नु हुदैन । हुँदै नभको कुरो कसरी लेख्न सकेका होलान् ! अब यसरी छाडा छोड्नु हुदैन ।
यस्ता कुराहरु होइन भनेर सबैले भनी सकेपछि चैं उनारु के भन्छन् त भिरघरे !
त्यही त अघि सुनाइन काका ! नेवारी भनाई – ‘हाले मज्युगु म्ये, कने मज्युग्ु बाखः’ अर्थात उनीहरु अहिले त गाउन नमिल्ने गीत, सुनाउनु नमिल्ने कथा’ भनेर ढुक्कले बसेको छ । पहिला मनपरी बोल्ने, लेख्ने, भन्ने, प्रचार गर्ने अनि अहिले आएर त्यसको गीत र कथा त गाउनै नमिल्ने, भन्नै नमिल्ने पो अरे । उसले अफवाह फैलाउँदा चैं गाउन र भन्न मिल्ने । अहिले थाहा भएपछि त सत्य कुरा लेख्न भन्दा नमिल्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ।
आवेशमा नआइज न भतिज सबैतिर यस्तै हो । भारतका नेताहर्ले नै ‘भारतीय मिडियाको विश्वास गर्दै नगर्नु ’ भनेर धेरै पटक भनी सके । हाम्रो पनि त्यस्तै हो। यिनार्को विश्वास नगरे हुन्छ । बरु सुनान राजनीति के हुँदै छ ? भारतले के गर्छ ?
राजनीति जस्तो छ त्यस्तो चल्छ काका ! प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक काम गर्नु भयो । वास्तवमा २०३२ सालमा हत्या गरिएको नक्सालाई सञ्जिवनी बुट्टी खुवाएर ब्युँताउनु भयो । यसको श्रेय उहाँलाई नै जान्छ । अब भारतले के गर्ला भन्ने सवालमा चैं ‘केही गर्दैन’ भन्ने नै लाग्छ ।
किन भिरघरे !
किन भने भारतको सबैभन्दा असल छिमेकी भन्नु नै नेपाल मात्र थियो । तसर्थ नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर नै राख्न चाहन्छ । भारतलाई स्पष्ट थाहा छ नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनता भारत विरोधी बनेका हुन भनेर ! बरु अटेर गर्ने, ल्याङल्याङ गर्ने वार्ताको समय सार्दै लाने, तयार भ’का प्रतिवेदन नबुझ्ने यस्तै काम गर्दै बस्ला । होइन भने वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ला ।
लु… काका ! अब म घरतिर लागे ।